Izindaba - Siza ozakwethu bathuthukise izimakethe
Siza ophathina ukuthuthukisa izimakethe
NgoFebhuwari 26,2018, iSekela likaMongameli u-Lihong Chen uvakashela abalingani bethu besikhathi eside be-Bromic Group.Imizamo kufanele yenziwe ukuhlangabezana nezidingo zabalingani, ukusiza umlingani ukuthuthukisa imakethe.Ukukhiqizwa okuyinhloko kufaka phakathi: I-Quarter Turn Supply Valve; Ama-Valve Wokunikezela Ama-Multi;F1960&F1807 Brass nokufaka ; Ibhola le-Brassvalve, njll. Njenge-Home Depot, i-Apollo, i-Watts, i-tec.Amakhasimende ethu anelisekile ngemikhiqizo nezinsizakalo zethu ezisezingeni eliphakeme.
Silwela umthetho wethu wenhlangano othi "Ikhasimende Kuqala, Isekelwe Ngekhwalithi" futhi sizoqhubeka nokusungula ukubambisana kwebhizinisi okuqotho nekhasimende ngalinye.
Manje umphakathi uyisikhathi sokuqhuma kolwazi, amabhizinisi emikhiqizweni angenakugwenywa ukuhlangabezana nabancintisana nabo, ukuncintisana kwemboni, kwamanye amabhizinisi, kuyinto enhle. Ngenxa yokuncintisana, amabhizinisi athuthukise ikhwalithi yemikhiqizo futhi athuthukisa ikhwalithi yesevisi, futhi abathengi bathole ukusetshenziswa okungcono noma okuningi kanye nezinsizakalo ngemali encane….
Imakethe "iyisihlungo". Ngenkathi imboni ithuthuka futhi ithuthuka, imakethe nayo iwina lo mncintiswano embonini. I-China isibe yindawo yokukhiqiza umhlaba, futhi yizwe elikhulu nasekukhiqizeni amaphampu nama-valve. Ekhulwini leminyaka elisha, imboni yaseChina yokupompa kanye neye-valve yenze intuthuko esheshayo, kepha futhi ibhekene nokuncintisana okunzima nezinselelo ezinzima.
Kuphela amabhizinisi e-pump ne-valve angaqonda kahle nangokucacile isimo samanje somkhakha, aqhubeke enza ngcono imikhiqizo yawo, aqinise umqondo wokukhathazeka, aqinise isiko lebhizinisi nomqondo wenkonzo yezimakethe….
Ngokukhuthazwa nokusekelwa kwenqubomgomo kazwelonke, iShanghai, iFujian neZhejiang benza imizamo emikhulu yokukhuthaza ukuguqulwa nokwenziwa ngcono kwemboni yokukhiqiza iphampu nevelufa, kufaka phakathi amanye amabhizinisi kahulumeni, amabhizinisi angaphandle namabhizinisi ahlanganyelwe.
Ithemba lokutshala imali embonini ye-valve yaseChina libanzi kakhulu. Ikusasa lomkhakha wepompo ne-valve lisobala. Ukusuka kokuhlangenwe nakho kwesikhathi esedlule, ukuphela okuphansi komkhakha we-valve waseChina ngokuyisisekelo kufinyelele kwasendaweni. Amabhizinisi asekhaya emikhakheni esezingeni eliphakathi nendawo nasezingeni eliphakeme kancane kancane angena esikhundleni sokungeniswa kwempahla ngenzuzo yokuqhathanisa yezindleko, isiteshi kanye nensizakalo, futhi kulindeleke ukuthi ajoyine imakethe yamazwe omhlaba ukuncintisana emakethe yamazwe omhlaba.